एनएसडब्लुको स्वास्थ्य अधिकार डा. जर्मी म्याक अनुल्टीका अनुसार राज्यमा पछिल्लो २४ घण्टामा जम्मा १४ हजार ८८५ परीक्षण भएको थियो । उक्त परीक्षणबाट जम्मा १ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उक्त व्यक्ति होटेल क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्ति रहेका छन् ।
डा. म्याक अनुल्टीले भनेका छन्, ‘एनएसडब्लुमा लगातार १९ दिनसम्म स्थानीयस्तरमा कोरोना संक्रमित भेटिएका छैनन् । यसलाई हामी पूर्ण रुपमा निमुर्ल पार्ने क्रममा छौं ।’
बुधबार राज्यमा जम्मा १६ हजार २९१ परीक्षण भएको थियो ।
राज्यले कुनै व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमणको लक्ष्यण देखिएमा तुरुन्तै जाँच गराउन भनेको छ ।